Maxaad kala socotaa RIKOODHADII cajiibka ahaa ee laga diiwaan galiyay guushii 11-aad ee xiriir ah oo ay Chelsea ka gaartay Premier League? – Gool FM
Maxaad kala socotaa RIKOODHADII cajiibka ahaa ee laga diiwaan galiyay guushii 11-aad ee xiriir ah oo ay Chelsea ka gaartay Premier League?
Haaruun December 17, 2016
(London) 17 Dis 2016 – Chelsea ayaa guul ka soo gaartay naadiga Crystal Palace oo ay booqatay, iyadoo sagaal dhibcood oo nadiif ah ku qabtay hoggaanka horyaalka Premier League, xilli macallin Antonio Conte iyo wiilashiisu soo gaareen guushoodii 11-aad oo xiriir ah.
Chelsea oo marti u ahayd kulankan kooxda Crystal Palace ayaa ku soo adkaatay 1-0, waxaana goolkaas madiga ah u dhaliyey 44’daqiiqo dhammaadkii qeybtii hore ee ciyaarta Diego Costa.
Kooxda tababare Antonio Conte ee Blues ayaa hoggaanka horyaalka Premier League ku qabatay 9 dhibcood oo nadiif ah, waxaana ay leeyihiin 43-dhibcood, halka Liverpool iyo Arsenal oo ku soo xiga ay wadaagaan min 34-dhibcood, inkastoo kulamadoodu u harsan yihiin.
>- Macallin Antonio Conte ayaa taariikh cusub u dhigay kooxda Chelsea, waxaana uu noqday tabababarihii ugu horreeyey ebid ee adkaada ama guuleysta 11-kulan oo xiriir ah Premier League hal xilli ciyaareed.
>- Diego Costa ayaa dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey oo uu madax ku dhaliyo xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League.
>- Chelsea ayaa noqotay kooxda saddexaad ee taariikhda gaarta 500 oo guul kulamada Premier League, waxaa kaliya ka horreeya Man Utd oo guul gaartay 593 kulan iyo Arsenal oo gaartay 512 guul.
>- Diego Costa ayaa goolkiisii 50-aad u dhaliyey kooxdiisa Chelsea tartammada oo dhan, waana in 17 ka badan ciyaaryahan waliba oo kooxdan ka tirsan tan iyo markii uu saftay kulankiisii ugu horreeyey.
>- Diego Costa ayaa dhaliyey goolkiisii 13-aad ee Premier League xilli ciyaareedkan, waana in ka badan guud ahaan goolashii uu dhaliyey xilli ciyaareedkii 2015-16 oo ahaa 12 gool.
>- Costa ayaa gool dhaliyey 12 kulan oo kala duwan horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, ma jiro laacib ka ciyaara horyaalka oo goolal dhaliyay 7-kulan ka badan.
>- Crystal Palace ayey soo gaartay guuldarrada ugu badan kulammada Premier League sanadkan 2016, waana in ka badan kooxaha kale, iyadoo Palace ay guuldarreysatay 22 kulan.
>- Chelsea ayaa hadda barbareysay rikoodhkeedii ugu dheeraa ebid ee guulaha xiriirka ah waana 11 kulan oo guulo xiriir ah, sidaas oo kalena waxa ay sameeyeen bishii September sanadkii 2009.
SHAX YAAB LEH: Koox laga sameeyay 11-ka kooxood ay ka soo wada adkaatay Chelsea
“Waxaan sameyn doonaa dabaal degga Cristiano Ronaldo haddii aan beri gool ka dhaliyo Real Madrid.”. Yuma Suzuki...+VIDEO